Mkpa nke Words — njem Lee - Official Site
Mkpa nke Words
Okwu ndị dị mkpa. Anyị na-eji okwu-ekwurịta okwu na enyi na ezinụlọ anyị. Anyị na-eji okwu anyị na-eduzi mbubehe. M na-eji okwu na-etinye songs ọnụ na-eme ka a dị ndụ. Anyị na-eji okwu na-adọ aka ná ntị ụmụ anyị. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eji okwu ka kwenye na ị na ha na ihe kasị mma nwa akwukwo maka ọrụ. Okwu ndị a nnukwu akụkụ nke akụkụ nile nke ndụ anyị. M nwere a ọhụrụ nwa. Ọ bụ ike na-ebi ndụ na mmadụ izu asaa ochie, tumadi n'ihi na ha apụghị ikwu okwu. Ya mere, mgbe ụfọdụ, m chọrọ inyere ya ma na-amaghị otú n'ihi na ọ pụghị ekwurịta okwu na okwu ma. O siri ike iche echiche banyere ụwa na-enweghị okwu.
The nkezi mmadụ na-ekwu banyere 16,000 okwu a ụbọchị. nke ahụ bụ 112,000 okwu kwa izu. Nke ahụ bụ ihe nde ise okwu ọ bụla n'afọ. Anyị na-eji okwu. A otutu.
Na ihe ọ bụla na e nwere ihe a ọtụtụ nke na-amalite na-undervalued. The uru nke ihe dị na-agbanwe dabere na ole e nwere. Mgbe e nwere 100 kuki na a table mgbe ọrụ i nwere ike na-ekwu okwu n'ihi na a mgbe. Ma mgbe e nwere nanị ole na ole kuki, o yiri ka ha dị oké ọnụ ahịa. Eleghị anya ị ga ọsọ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-otu na oge, na aru bụ a otutu dịkwa ụtọ. N'ihi na anyị na-anụ ma na-eji ọtụtụ okwu kwa ụbọchị si ha n'obi ọtụtụ ihe anyị. Ma, anyị kwesịrị ịhụ ha dị ka oké ọnụ ahịa.
Ma eleghị anya, anyị na-eche naanị mkpa n'ezie ihe anyị na-ekwu bụ ịrịba. Ma eleghị anya, anyị na-eche naanị ihe anyị na-ede, ma ọ bụ naanị mgbe anyị nwere groundbreaking mkparịta ụka ma ọ bụ naanị mgbe anyị na-ekwu ihe anyị na-n'ezie na-eche okwu anyị mkpa. Echere m na anyị amaokwu n'abalị agwa ihe dị nnọọ iche. Tụgharịa na m na-Matthew 12:36.
Ma asim unu, na ndikom ga-enye akaụntụ na ụbọchị ikpé nke ọ bụla akpachapụghị okwu ha gwara. (Matthew 12:36)
Jizọs na-ekwu okwu ndị a na n'etiti a mkparịta ụka na ndị Farisii, mgbe ha na ebubo ya achụpụ ndị mmụọ ọjọọ Setan. Ya mere, Jizọs ihu ọma agwa ha na ha na-na ihe ọjọ, na-enweghị ike ikwu ihe ọ bụla dị mma (o nwere ụdị ụzọ na okwu). Ọ gwara ha na ihe niile anyị na okwu ndị na nkpuru nke ihe na-e mkpọrọgwụ n'ime obi anyị.
Mgbe ahụkwa ọ tụlee na bọmbụ on anyị. Nke ahụ ga-na anyị ga-aza Chineke maka ọ bụla akpachapụghị okwu anyị na-ekwu. Nke a adịghị naanị emetụta ndị Farisii. Ọ bụ eziokwu n'ihi na ọ bụla otu n'ime anyị. Na ndị na-esonụ amaokwu bụ ọbụna ihe na-emenye ụjọ. ọ na-ekwu, "N'ihi na ihe i gwara a ga-tọhapụwo, na ihe i gwara ga-ikpe. " Mana gịnị mere? Gịnị mere anyị okwu otú ahụ dị mkpa? Gịnị mere anyị ga na-tọhapụwo ma ọ bụ ikpe dabere na ihe dị ka ihe na-enweghị ka okwu anyị na-ekwu?
Ọ na-eme ka nke ahụ doo anya tupu mgbe ahụ mgbe ọ na-ekwu,, "Ọ bụ ihe ejupụta mmadụ n'obi ka ọnụ na-ekwu." Ò NWEELA mgbe obi emegbu ekpe ikpe? Dị ka onye na-ejide ị on a ọjọọ ụbọchị mgbe ị dị na ewere na-ekpe ikpe gị dum agwa on na otu ụbọchị? Ọma a na-ekpe ikpe site na okwu anyị abụghị ka na. Ọ dịghị ka okwu ndị a nanị otu akụkụ nke anyị kọrọ akụkọ ya na-adịghị esi kọwaa anyị. Anyị nwere nnọọ ike ekpe ikpe site na okwu anyị n'ihi na ha bụ ezi ngosipụta nke ihe na-eme anyị obi.
Ọ fọrọ nke nta ka m na-ejide a cup, ị na-amaghị ihe bụ ihe na e. M nwere ike ịgwa gị mmiri dị n'ebe ahụ, ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ bụ na e. Ma ọ bụrụ na m ịkwada na ikwommiri ma ọ bụ Nchoputa ụfọdụ n'ime na ọṅụṅụ, ị ga-maara n'ezie ihe bụ na e. Ọ bụ otú ahụ ka okwu anyị na obi anyị. Mgbe anyị na-ekwu okwu, ọdịnaya nke obi anyị na-awụfu si. Okwu anyị mgbe niile na-egosi ihe bụ obi anyị, ma mma ma ọ bụ ihe ọjọ. Na dị ka Pọl Tripp, onye edemede m na-agụ nke a izu, kwuru, "Ị dịghị mgbe kwuru a na-anọpụ iche okwu ná ndụ gị."
Aza ajụjụ banyere okwu anyị
Ọ bụla ugbu a, mgbe mmadụ ga-ejide on teepu ikwu ihe ọ dịghị mgbe ha gaara ekwu n'ihu ọha. Nke a mere ka President Obama mgbe ọ na-agwa ndị President nke Russia. Nke a mere ka Mitt Romney urua. Ha atụghị anya na a ga-aza ajụjụ banyere okwu ndị ahụ, ma ha. N'otu aka ahụ, anyị chere na anyị agaghị aza ajụjụ banyere okwu ụfọdụ anyị na-ekwu. Anyị na-eche na anyị na-ekwu ihe, na it's mere, ma ha ga-azụ ka ọ taa anyị. Ọ bụ dị ka ma ọ bụrụ na Chineke nwere zoro ezo ese foto nile e kere eke.
E nwere otu ụbọchị - ederede na-akpọ ya na ụbọchị ikpé - mgbe anyị ga-eguzo n'ihu nsọ Onyeikpe nke eluigwe na ụwa. Na mgbe anyị na okwu anyị ga na-eguzo dị ka ndị akaebe - ma àmà anyị ma ọ bụ buso anyị. The àmà na-egosi ga-ọkọnọ.
Chineke ga-eleru anya n'otú anyị gwara papa anyị na mama dị ka nwatakịrị ahụ na otú anyị na-agwa anyị na di na nwunye ma ọ bụ bosses dị ka ndị okenye. Chineke ga-atụle ụzọ anyị kwuru okwu na-amabughị n'okporo ámá. Chineke ga-enyocha njakịrị anyị gwara anyị ngalaba-ọrụ. Chineke ga-rachighaa site na anyị iwe rants na okporo ụzọ na mbanye-arụ ọrụ. Ọ ga-ọbụna pịgharịa site na ihe anyị na-mesịa ke Facebook na Twitter. Ọbụna okwu ndị anyị na-eziga na ozi ederede ma ọ bụ ozi ịntanetị. Ọ bụla otu okwu.
Ị hụrụ Jesus ekwughị na anyị ga-enye ajụjụ maka ihe ndị dị mkpa okwu anyị na-ekwu. ọ na-ekwu, "Bụla akpachapụghị okwu." Okwu-eji na- akpachapụghị anya kwa sugharia ka na-abaghị uru ma ọ bụ na-abaghị uru. okwu nile ọ bụla, n'agbanyeghị otú na-abaghị ị na-eche na ọ bụ. The maara ihe nile Chineke anyị na-ekwu banyere nke a ụtụtụ, maara okwu nile ọ bụla na anyị na mgbe kwuru.
Na ebe a bụ ihe. Nanị otu adịghị asọpụrụ Chineke okwu bụ iji maa anyị ikpe. Nke N'ezie pụtara, anyị niile kwesịrị ịkatọ maka okwu anyị.
Ọfọn e nwere atọ okwu, kpere site Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na supersede ọ bụla akpachapụghị okwu m na mgbe kwuru. Ndị atọ kwuru bụ "Ọ. bụ. Okokụre. "Mgbe O biri ndụ zuru okè ndụ, mgbe nwere na-eji okwu ya n'ụzọ na nye Chineke otuto, Jizọs gara cross. Na mgbe ọ eyịride na cross, o we nwua ọbụna n'ihi mmehie nke okwu ọnụ anyị na. O wee bilie mgbe ụbọchị atọ gasịrị.
Na n'ihi na ndị na-etinye okwukwe anyị na Kraịst, ee, e nwere kwuoro okwu anyị na-na kwuru na ndị mkpụrụ nke mmekọrịta anyị na Kraịst. Na okwu ndị ga-agba akaebe na anyị amara. Ma anyị ka ga na-ikpe niile ọzọ okwu. Na-eto Chineke na ọbara nke Onyenwe anyị Jizọs na-ekpuchi okwu ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-amaghị Jesus, chigharia mmehie gị na ntụkwasịobi na naanị otu onye nwere ike ịgbaghara gị niile mmehie gị, nke gunyere nmehie nile nke okwu gị.
Ya mere, dị ka ndị kwere ekwe, ezie na anyị agaghị ịkatọ maka okwu anyị, anyị ga-ka a ga-aza ajụjụ banyere ha. Anyị ga-ka nwere zaa Chineke maka ha ma na anyị nwere ike ida ụgwọ ọrụ n'Eluigwe.
Ụfọdụ n'ime anyị bụ nnọọ anya na anyị ego. Anyị na-eme Amawaputala, anyị ghara imegide anyị checkbooks, anyị na-receipts, na na anyị anya na anyị online ịgba ụgwọ okwu. N'ihi na anyị maara na a otutu nọ n'ihe ize. Anyị maara na anyị ga-elekọta ụlọ ego anyị nke ọma.
Ọma na otú ahụ nke carefulness, na ngụkọta oge a ga-etinyere n'otú anyị si eji okwu anyị. N'ihi na a otutu nọ n'ihe ize. Na anyị ga-aza Chineke maka onye ọ bụla n'ime anyị okwu. Anyị kwesịrị ọma-elekọta ụlọ nke okwu anyị na-eji.
Okwu anyị dị ka hama. Anyị nwere ike elezighị siwing ha gburugburu na-agbaji stof. Ma ọ bụ na anyị nwere ike iji ha nke ọma na-ewu stof. Olee otú unu ga-esi gị okwu n'izu a? Olee otú anyị na-eji okwu anyị a gara aga izu ga-eleghị anya na-egosi anyị otú anyị nwere ike iji ha nke a na-abịa izu, ma ọ bụrụ na ihe mgbanwe.
N'ihi ya, m chọrọ inye ụzọ atọ na anyị nwere ike iji okwu anyị nke ọma.
m. Agwa Chineke okwu
nke 16,000 okwu anyị na-eji ụbọchị ọ bụla, anyị ga-adị mma iji ọtụtụ n'ime ndị na mkparịta ụka na Chineke. Jesus nyere anyị ohere ka Nna, na anyị ga-abịa n'atụghị egwu n'ihu ocheeze Ya mgbe. Anyị na di na nwunye pụrụ inwe nsogbu na ịbụ ege ntị nke ọma, Ma, Chineke anaghị. Ọ na-anụ ekpere anyị. N'ezie, O gere nnọọ anya.
Ọtụtụ mgbe, mgbe anyị na-aga site na ihe isi ike, ihe mbụ anyị na-eme bụ naanị egosi enyi nke ezinụlọ. Ma ọ bụ ma eleghị anya, anyị na-dị nnọọ rant banyere ya n'olu dara ụda ka anyị onwe anyị. Ihe a n'iyi otú okwu. Dị nnọọ ikpeazụ izu, M na-mkpesa nwunye m banyere ihe na-e dị n'ezie-emekpa m na m bụ nchegbu banyere. Na n'iru ekwere ma ọ bụ àjà ndụmọdụ ọ bụla, ọ dị nnọọ jụọ m nanị, "Ị na-ekpe ekpere banyere ya?"Na azịza ọ dịghị. M kwesịrị e ịgwa Chineke okwu banyere ya. Nke ahụ gaara abụwo a nnọọ mma ojiji nke m kwuru.
Ọtụtụ mgbe iwe na-eme ihe ọzọ karịa ime ka anyị na madder. Ọ bụ igbu okwu mgbe ụfọdụ. Ma na-agwa Chineke bụ mgbe a n'efu nke okwu. E nwere ihe adịghị mma ojiji nke okwu gị. Na anyị na-achịkwa, ma O bu. Ya mere, mgbe anyị chọrọ enyemaka, kama dị nnọọ ịbụ na ewere, anyị kwesịrị nnọọ ịgwa ndị na Onye bụ na-elekọta. Ma ọ bụrụ na ọ bụ anyị mma na n'ihi ebube-, Ọ ga-enye anyị anyị arịrịọ.
Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ịbụ olu ike. Na mgbe anyị nwere nsogbu gị na mmadụ, anyị na-aga n'aka nri nye onye na-elekọta ya. Anyị kwesịrị icheta na ịgwa Chineke okwu banyere ọnọdụ bụ ihe dị mkpa ma dị irè karịa na-agwa onye nke ọzọ. -Agwa Chineke maka gị relational mbipụta tupu ị na-agwa onye nke ọzọ. Arịọkwa ya maka enyemaka na amara na amamihe. Ekwe ka ịdị arọ nke-agwa Onye Okike gị ka anya doo gị ma nyere gị aka na-eche na ihe doro anya.
Na anyị kwesịrị bụghị nanị na-eji okwu anyị na-arịọ Chineke maka stof. Nke a bụ ya mere na anyị nwere ekpere otuto n'ụtụtụ Sọnde ọ bụla. Anyị kwesịrị nnọọ eto Ya ụfọdụ ugboro. Anyị ga-abịa na pụrụ iche ụzọ na-abụ abụ too ya. Ihe karịrị nanị, "Ọ dị mma. Daalụ Chineke. "Obi nke jupụtara n'ịhụnanya maka Chineke na-enwe ọhụrụ ụzọ na ọhụrụ ihe na-eto Chineke kwa ụbọchị. O kwesiri otuto anyị.
II. -Agwa ndị na Good News
M nwere ike na-eche nke ihe dị mma karị ịgwa onye ọzọ, karịa Good News. Chineke kwuru okwu ikpeazụ ndị a site Ọkpara Ya Jizọs Kraịst. Na anyị kwesịrị ịgwa ndị ọzọ banyere Ya na ihe O merela.
Ndị Rom 10 -agwa anyị na, "Okwukwe si n'aka anụ na-anụ site na Okwu nke Kraịst." Otú a ka Chineke na-azọpụta ikom na ndị inyom. Mgbe ha na-anụ Oziọma na-enweta ya site n'okwukwe.
Achọrọ m ka ị na-eche maka oge banyere ihe mmadụ ná ndụ gị mkpa ịnụ Oziọma. Ọ bụ onye òtù ezinụlọ, a onye otu, a agbata obi, a na-akpụ isi, a dọkịta? Gịnị onye na ndụ gị mkpa ịnụ Oziọma?
Ọ dị mma n'ihi na anyị ka anyị jiri okwu na-ewu mmekọrịta na na-ala na anyị abụghị Ndị Kraịst enyi. Ọ dị mma n'ihi na ha mara ị hụrụ ha. Ma ọ bụ na-agbawa obi ma ọ bụrụ na ọ dịghị mgbe anyị n'ezie Gafee ekere òkè Oziọma na ha. Ọ ga-agbalị ibibi ma ọ bụrụ na anyị nwere 10 mkparịta ụka banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụghị onye banyere Oziọma. Ọ ga-abụ na-agbawa obi ma ọ bụrụ na anyị nwere enwe kwa izu ụka banyere egwuregwu, ma mgbe ọ bụla mkparịta ụka banyere Jizọs. Na m na-ekwu banyere onwe m.
na nso nso, M nwere ndị òtù ezinụlọ anwụ. Na mgbe ọ bụla nke ahụ mere, ọ na-echetara m, na ụfọdụ ugboro na ọ dị mma ichere, ma mgbe ụfọdụ m kwesịrị ịgwa folks banyere Jesus ugbu a. Amaara m na m nupụrụ isi ike igbochi Chineke atụmatụ, ma nke ahụ apụtaghị na m ga-enupụ isi. Na-ahụ na e, -eso nduzi nke mmụọ nsọ, ma mara na Ọ dịghị mgbe na-eduga anyị yipụ ihe stof na kwesịrị na-kwuru now. -Agwa ndị na Good News.
Nke a apụtaghị na anyị kwesịrị naanị mmekọrịta na-abụghị Ndị Kraịst. Ma ọ pụtara na ọ chọrọ ka eme. Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ime ka ha ụka ma jiri ozizi dị ka a launching ka mpe mpe akwa ikwu okwu banyere ya. Ma eleghị anya, anyị na-arụtụ ha ezigbo akwụkwọ ma ọ bụ cd na nta banyere Gospel (ahem, nke m). Ịchọta ụzọ na-agwa ndị Gospel.
III. Ewuli ndị ọzọ elu (G- Grace)
Ekwela ka ihe ọ bụla na-adịghị mma okwu-esi gị n'ọnụ, kama ọ bụ naanị ihe na-enye aka maka iwuli ndị ọzọ elu dị ka mkpa ha si, na ọ na-erite ndị na-ege. (Ndị Efesọs 4:29)
Na kwesịrị n'ozuzu ya duzie ụkpụrụ ka okwu anyị ndị ọzọ. Naanị ihe na-enye aka maka iwuli ndị ọzọ elu. Dị ka m kwuru na mbụ, okwu anyị dị ka hama. Anyị nwere ike imebi stof ma ọ bụ ewu stof. Na e nwere tọn ụzọ ewuli ndị ọzọ elu.
Jesus agwa anyị na nwoke ọ dịghị ebi anya naanị achịcha, ma okwu nile ọ bụla na wee si n'ọnụ Chineke. Chineke kwuru okwu dị oké ọnụ ahịa okwu. Na anyị kwesịrị ịbụ ada ndị dị oké ọnụ ahịa okwu ọ bụla ọzọ ọ bụla ohere anyị na-enweta.
Otu ụzọ bụ agbamume. Echere m na nke a bụ ihe CHBC-eme nnọọ nke ọma. Ọ n'ezie na-ejide mụ na nwunye m na mberede mgbe mbụ anyị bịara. "Ọ bụ na ha dị nnọọ agba m ume banyere ajụjụ m jụrụ?"Up n'okpuru agbamume a bụ n'ọnu. kwusie ndị ọzọ. Na-agwa ha mgbe ị na-ahụ ihe àmà nke Chineke na amara na ná ndụ ha. Ikwenye na unu hụrụ ha. Kwusie Chineke hụrụ ha.
Ụzọ ọzọ na-esiri ibe. Anyị ekwesịghị iche 'wulite' pụtara otu ihe ahụ dị ka cute, inspirational sounding okwu. Mgbe ụfọdụ, ewu anya dị ka iba-nba, ma ọ bụ mgbazi. Mgbe ụfọdụ, ọ na anya dị ka ihe ịma aka a na nwa- nne na-akpọ ha ndị na-echegharị mmehie. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị anyị kwere nkwa ọ bụla ọzọ na-eme - na-eje ije na onye ọ bụla ọzọ site n'ezi ugboro na ike ike ugboro.
Na anyị eme ka a na-aga site a aghara oge dị ka a na chọọchị ugbu a. Na abụọ dị anyị mkpa agbamume na ihe ịma aka okwu. Agba ume na ụmụnna gị na Gospel. Chetara ha ọbụbụeze Chineke ma na-Ya ịdị mma na o kwere. Na kwa aka na ụmụnna gị ọgụ ihe ọma ọgụ nke okwukwe, ịnọgidesi ike na-atụkwasị Jesus. Anyị kwesịrị na.
Ụzọ ọzọ ị pụrụ ewuli ndị ọzọ elu bụ site n'inye ezigbo ndụmọdụ. The kasị tozuru okè mkpebi eso ndị na-adịghị eme mkpebi na-akpa iche. -Abụ dị ka anụ banyere ihe na-aga na nwanne gị ndụ. Na-enyere ha na-eche site otú Chineke ga-enwe ha ikwu. Na-enye Ndụmọdụ Bible.
N'otu aka ahụ, dị ka a na chọọchị, anyị na-eme oké ọrụ nke inwe ihe mmụọ mkparịta ụka. N'akụkụ aka nke ọzọ, anyị kwesịrị atụla egwu ikwu okwu banyere ihe ndị ọzọ karịa Jesus. Anyị nwere ike ikwu banyere ndụ, na anyị nwere ike ikwu banyere egwuregwu, naanị mee ya n'ụzọ na-ewetara Chineke otuto.
Ụfọdụ n'ime unu kwesịrị ịkwụsị ikwu nke ukwuu na ndị ọzọ mkpa ịmalite na-ekwu okwu ọzọ. Ụfọdụ n'ime anyị mkpa ịdị na-quicker ịnụ. Ụfọdụ n'ime anyị dịghị mgbe iji ihe ọ bụla okwu. Na anyị kwesịrị ime ihe. Saghe. Chineke na-arụ ọrụ ná ndụ gị na anyị chọrọ ịnụ banyere ya. Ka ihe nile unu okwu-eji mara ịhụnanya. Ekpere m bụ ka CHBC ga-abụ a na chọọchị ji hụrụ anyị n'anya gwara.
Ka ị na-achọ ime ihe ndị ị na nụrụ n'abalị, adịghị eme ka mmeghe nke nnọọ na-agbalị na-esochi nke ihe ị na-ekwu na dị nnọọ na-agbalị ime ka mma. Adịghị nnọọ mee nke a nanị na-abụghị.
Dị ka anyị na-ahụ na mbụ ke ederede, ihe na-echekwara ruo na obi anyị na-abịa si. Anyị ekwesịghị iche na e nwere iwepu n'etiti obi na ire. Ya mere, na-akpakọbaranụ ezi ihe n'ime obi gị ma na-ekiri ha ejupụta. Ma mgbe anyị na, ebe a bụ otú anyị ga-agbalịsi ike iji anyị okwu.
The ezigbo ụzọ na-ekiri okwu gị bụ na-ekiri obi unu n'ihi na ha na-otú njikọ chiri anya. E nwere a kpọmkwem akara si n'obi ha na ire. -Ele gị obi, na site na-eme na, -ele gị Words. Na ime nke a site n'ikiri Okwu.
francismewa • November 22, 2014 na 3:10 Abụ • zaghachi
ọ dị mma ịgụ gbasara uru okwu bara . Ekwupụtala ihe ndị dị mma site na nke a , daalụ maka okwu dị mma
mpempe akwụkwọ • February 3, 2015 na 3:43 Abụ • zaghachi
nke a di egwu. a sị nnọọ na mmadụ niile ga na-agụ ya, Ghọta ma debe iwu, ụwa ga - abụ ebe kachasị mma obibi.
muskan • October 24, 2015 na 9:22 Abụ • zaghachi
anyi na eji otutu okwu
Rita • November 4, 2015 na 4:25 pm • zaghachi
Nke a bụụrụ m ihe mmụta n'oge. Ndi m na ekwu maka okwu a n’abali a n’akwukwo Nso. Ekele dịrị Chukwu maka ịbịaru m na weebụsaịtị gị ma kelee Chukwu maka iji kọwaa okwu Ya n'ụzọ doro anya ma dị mfe nghọta.
Chukwu gozie oru gi!
Barbara • February 5, 2016 na 6:03 pm • zaghachi
Okwu dị mkpa n'ezie. Ezigbo ozi. Biko wepụta oge gaa na websaịtị m maka Chukwu enyekwala m ọrụ ịkụziri ndị ọzọ banyere ịdị mkpa okwu.
aha: Okwu dịkarịsịrị ọkara bụ nke mmadụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị
aha: 2016 Na Nyocha – Ahụmahụ m na-achụ nta Job | Mmetụta SharePoint
aha: okwu – Banana Wifey
aha: Kwusara Ozi Ọma / Ncheta / James 3 / Ike nke Okwu ahụ